South Korea Oo Kaalinta 3aad Gashay Kuna Guuleysatay Billada Bronze Tartanka Olombikada Adduunka - jornalizem
South Korea Oo Kaalinta 3aad Gashay Kuna Guuleysatay Billada Bronze Tartanka Olombikada Adduunka
Xulka kubbada cagta ee dalka Koonfur Kuriya ayaa ku guuleystey billada bronze ee ciyaaraha kubbada cagta Olombikada kadib markii ay 2-0 ugaga badiyeen xulka Japan.
Guushan ay gaartey Koonfur Kuriya ayaa waxaa ay ka dhalatay labo gool oo labadii qeyb ee ciyaarta kala dhaliyeen Park iyo Koo.
Kulankan oo ahaa mid aad u adkaa kuna soo beegmay xilli labada dal dhinaca siyaasada uu muran ugaga dhexeeyo ayaa ciyaarta waxa ay sababtay in kaarar badan oo hurdi ah loo taago qaar kamid ah ciyaartoydii kulankan labada dhinac u safnayd.
Goolkii u horeeyey ayaa waxaa u dhaliyey xulka Koonfur Afrika weeraryahanka Arsenal ee Park Chu-Young daqiiqadii 38aad.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-0 hase yeeshee xulka Koonfur Afrika ayaa u suurtogashay in uu gool labaad ay dhaliyaan daqiiqadii 56aad waxaana u dhaliyey kabtankooda Koo Ja-Cheol.
Xulka Koonfur Kuriya ayaa labada gool ee ay dhaliyeen ay difaacdeen waxana ay billadii bronze ama maarta ay ku qaateen guusha ay ka gaareen dalka Japan.
Koonfur Kuriya ayaa saddex bedel ku samaysay kooxdii kulankii semifinalka ay xulka Brazil ugaga badiyeen 3-0 waxaana dib loogu yeeray weeraryahanka Arsenal Chu-Young Park isagoo lagu bedelay Hyun-Sung Kim waxayna soo safeen goolhayahoodii koowaad Sung Ryong-Jung oo dhaawac ka soo laabtay.
Hase yeeshee xulka Japan ayaan waxba ka bedelin ciyaartoydii 3-1ka loogaga badiyey kulankii Semifinalka ee ay la ciyaareen Mexico. Waxana u ahaa weeraryahanka goolal ay ka sugaan Kensuke Nagai oo kaliya.
Ciyaartan ayaa waxa ay ka dhacday garoonka Millennium Stadium ee ku yaal magaalada London. Ciyaarta Finalka ee olombikada adduunka ayaa waxaa isaga horiman doona xulalka Brazil iyo Mexico.